လျှပ်စီး Box ကိုဂိမ်းများ, ထိပ်တန်း slot က site ကိုဗီဒီယိုသစ်တစ်ခု slot က Panda Pow လွှတ်တင်. ဤသည် slot ကတစ်ငါး reels နှစ်ဆယ်ငါးလစာလိုင်းများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အဲဒါကို 'အဘိဓါန် Kung-fu bear'.The slot ကမှတက်ပေးအပ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဆုကြေးငွေ feature ကိုကမ်းလှမ်းတရုတ်ကာတွန်း၏ဆောင်ပုဒ်အပေါ်တွင်အခြေခံထားပါသည် 20 အစဦး၌ပေမယ့်အထိပေးသနားတော်မူနိုင်သည့် Re-ခလုတ်အင်္ဂါရပ်၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်အတူအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ 40 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများက ပို. ပင်အကျိုးအမြတ်စေသည်. တဦးတည်းလည်းကြီးမားအနိုင်ရရှိစေရန် stacked ရထားတဲ့ reels အပေါ်အလွကိုရွှေပန်ဒါရှာရမယ်. သငျသညျကနေအသစ်က slot နှစ်ခုထွက်စစ်ဆေးနေ like ပါလျှင် ထိပ်တန်း slot ကဆိုက် သို့ဖြစ်လျှင်ဤ slot ကဆက်ဆက်သင်အလောင်းအစားတိုင်းတစ်ပြားရကျိုးနပ်သည်.
အဆိုပါရဲရင့်, အဘိဓါန် Kung-fu-မေတ္တာရှင်, ကာတွန်းဝက်ဝံထိပ်တန်း slot က site ကို '' Lightning Box ကိုဂိမ်းများ '' ကကမ်းလှမ်း Panda Pow အတွက်ဗဟိုစင်မြင့်ကြာ. ဒီဂိမ်းထဲမှာ, ကစားသူတစ်ဦးလှည့်ဖျားနှုန်း£ 0.25 ၏နိမ့်ဆုံးပမာဏနှင့်လှည့်ဖျားနှုန်း£ 1000,00 အများဆုံးပမာဏကိုနှင့်အတူဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်. လည်း, တဦးတည်း£ 100 အထိလိုင်းနှုန်းဒင်္ဂါးပြားမှ£ 0,30 လိုင်းနှုန်းဒင်္ဂါးပြား၏နိမ့်ဆုံးအကွာအဝေးကနေအကြွေစေ့အကွာအဝေးကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာ၏ကစားသမားရာခိုင်နှုန်းတစ်ပြန်လာရှိပါတယ် 95-97%.
ဒါကြောင့်ထူးခြားသော Is ကဘာလဲ?
ကျနော်တို့ကအမြဲ Lightning Box ကိုဂိမ်းများ i.e ထိပ်တန်း slot က site ကိုကတီထွင် reels ၏အမြင်အာရုံဒီဇိုင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိကျွမ်းဖို့သိချင်စိတ်ရှိ. သူတို့ရဲ့ဗွီဒီယိုအသစ် slot က Panda Pow ဒီ list မှနောက်ဆုံးပေါ်ထို့အပြင်သည်နှင့်လောင်းကစားရုံကစားသမားအကြားကြီးမားတဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိထားသူ. အဆိုပါ reels အလွန်ကောင်းစွာတရုတ်စတိုင်ထွင်းထုနှင့်အတူအလှဆင်နက်နဲအနီရောင်နောက်ခံဖြတ်ပြီးသတ်မှတ်ထားကြသည်.
အဆိုပါကစားသမားမီးအိမ်ထွက်သည်ကိုကြည့်ရမယ်, ပရိတ်သတ်တွေနှင့်ရွှေဒင်္ဂါးပြား, သူတို့ထဲကအသီးအသီးအသီးအသီး payline ဘို့တရာမှဒင်္ဂါးပြား၏ဖွင့်ဆုကြေးငွေကမ်းလှမ်းအဖြစ်. အဆိုပါရှေငါးတို့ကပူးပေါင်းဤသူအပေါင်းတို့သည်သင်္ကေတများပါလျှင်စံသင်္ကေတများထဲကနှစ်ရာ coins.The အများဆုံးသှေးဆောငျသင်္ကေတရန်အနိုင်ရရှိတဲ့တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်ကလေးငယ်တစ်ပန်ဒါဖြစ်ပါတယ်- အပင်တစ်ပင်ကိုဌာနခှဲအပေါ်အနားယူ. ဤသည်မှာသင်္ကေတကိုသင်ရနိုင် 2, 5, 50, 125 သို့မဟုတ် 500 ဒင်္ဂါးပြားတစ်ဦးကစားသမားတဦးတည်းဆင်းသက်နိုင်လျှင်, နှစ်, သုံး, ၏တဦးတည်းအပေါ်လေးငါး 25 ဂိမ်းလိုင်းများပေးဆောင်.
ဒီဂိမ်းရဲ့မျက်စိ-ဖမ်းသင်္ကေတတစ်ခုမှာဒုတိယပန်ဒါဖြစ်ပါတယ်- အနီရောင် headband ဝတ်ထား. ဒါဟာရိုင်းအဖြစ်ကြဲဖြန့်သင်္ကေတအဖြစ်ပြုမူကြောင့်ရှိသမျှသည်အခြားသောသင်္ကေတများအစားထိုးနိုင်ပါတယ်. ထို့အပြင်, ဒါကြောင့်လည်းအခမဲ့ဆုကြေးငွေအင်္ဂါရပ်ကိုသက်ဝင်စေဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်. ကိုယ်ကသာအပေါ်ဆင်းသက်နိုင်ပါတယ်3အလယ်တန်း reels နှင့်ကြီးမားသောအနိုင်ရရှိများအတွက်အနိုင်ရပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်. ဒီငါးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလေယာဉ်ဆင်းသက်အခမဲ့ဆုကြေးငွေအင်္ဂါရပ်ကိုသက်ဝင်အောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်ကစားသမားဆုချီးမြှင့်ထားတဲ့အတွက်နိုင်ပါတယ်-
5 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ5ပန်ဒါအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေ.
8 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ6ပန်ဒါအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေ.
12 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ7ပန်ဒါအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေ.
15 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ 8 ပန်ဒါအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေ.
20 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ9ပန်ဒါအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေ.
လည်း, တဦးတည်းကိုအလွယ်တကူသစ်ကို stacked သင်္ကေတကိုကြည့်ရှုနိုင် – အဆိုပါ Golden Panda အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ reels ထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်. တစ်ဦးကစားသမား reels အပေါ်တာမျိုးတဲ့အခါဒီသင်္ကေတကိုအပြည့်အဝ stacked ပုံ 2, 3,4နှင့် 5. ထို့အပြင်, တစ်အနိုင်ရပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်အတွက်, ဒီသင်္ကေတကိုကြဲဖြန့် မှလွဲ. ရှိသမျှသည်အခြားသောသင်္ကေတကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်. တူညီလှည့်ဖျားပေါ်မှာသူတို့ထဲကလေယာဉ်ဆင်းသက်မျိုးစုံ, တဦးတည်းကြီးမားတဲ့ဆုလာဘ်ဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်.
ထိပ်တန်း slot က site ကိုတို့က Panda Pow i.e Lightning Box ကိုဂိမ်းများအမြဲ slot ကရည်းစားများမျှော်လင့်ချက်များပြည့်စုံပြီ. အထူးဆုကြေးငွေအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူ, ဒီဂိမ်းအတော်လေးစွဲလမ်းဖြစ်လာသည်. ဒါဟာအလယ်အလတ်ကှဲလှဲရှိပြီးတဦးတည်းကသူ့ရှယ်ယာများ၏အထိ 500 ×အများဆုံးဝင်ငွေရရန်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်. လျှပ်စီး Box ကိုရှင်းလင်းစွာဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဂိမ်းစတင်နေဖြင့်ထိပ်တန်း slot က site ကိုအဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်က Check!